Topnepalnews.com | छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा ३ को मृत्यु, ३२ जना घाइते
Posted on: September 03, 2017 | views: 430
सुनसरी । सुनसरी र मोरङमा आइृतबार भएको दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । धरानको भानु चोकमा स्कुटरलाई ट्रकले ठक्कर दिदा एक युवतीको मृत्यु भएको छ ।
धरान ११ शिवजी चोक बस्ने २९ वर्षीय पूर्णीमा सुब्बाको विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लैजाने क्रम बाटामै उनको मृत्यु भएको हो ।
कोशी राजमार्ग अन्र्तगत धरान–७ स्थित को २२ प २४७४ न. को स्कुटी आफै अनियन्त्रित लडेको बेला ईटहरी तर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३१४९ न. को ट्रकले धरान ११ की पूर्णमा लिम्बुलाई ठक्कर दिदा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ । स्कुटी चालक धरान–११ कै ३५ बर्षीय निरुपन लिम्बु घाईते भएको छ । ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यस्तै मोरङको गोठगाउँमा आइतबार विहान स्कार्पियो गाडी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यू भएको छ । घट्नामा एक युवती घाइते भएकी छिन् । पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७ स्थीत गोठगाउँमा बिहान सवा ७ बजेतिर सो दुर्घटना भएको हो । तीब्र गतिमा रहेको बा १६ च ४७५७ नम्वरको सो गाडी अनियन्त्रित भई सडक किनाराको रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–२ का ३५ वर्षीय रामकुमार राई र झापा कन्काई नपा बस्ने २० वर्षीया विमला राइको मृत्यू भएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी झापा पृथ्वीनगर बस्ने २० वर्षीया रेणु राई घाइते भएकी छिन् भने उनको धरानस्थित वि पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ । गाडी चालक चालक पुर्ण बहादुर तिम्सिनालाई प्रहरीले नियन्त्रणा लिएको छ ।
यस्तै सुनसरी भोक्राहा ६ पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउदै गरेको ना.४ ख ८५८७ नम्बरको बसले साईकल यात्रीलाई जोगाउने क्रममा आफै अनियन्त्रित भइ पल्टदा ३२ जना घाईते भएका छन् । सडकबाट १० मिटर तल खसेको थियो । घाइते २४ जनाको न्युरो अस्पताल बिराटनगर उपचार भईरहेको छ । बाँकी आठ जनालाई जिल्ला अस्पताल सुनसरी उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझीले जानकारी दिए ।